Hlola i-Oman - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili e-Oman.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Oman
Bukela ividiyo ekhuluma ngo-Oman
Hlola i-Oman noma ngokusemthethweni i-Sultanate of Oman ese Middle East, emaphethelweni aseningizimu-mpumalanga yeNhlonhlo yase-Arabia. Imingcele I-United Arab Emirates enyakatho-ntshonalanga, Saudi Arabia entshonalanga, kanye neY Yemen eningizimu-ntshonalanga. U-Oman unezimbotshana ezimbili ezihlukaniswe yi-United Arab Emirates, iMinsandam Peninsula neMadha.
Ama-Omanis angabantu abanobungane futhi asiza kakhulu kubavakashi. Futhi, izivakashi kufanele zihloniphe izindlela namasiko abantu bakwa-Omani.
Abakwa-Omanis bayaziqhenya ngentuthuko yabo esheshayo yezwe labo kanye namagugu abo njengenye yezizwe ezinkulu ezikhulisa ulwandle. Izikole ezisezingeni eliphezulu kanye nezibhedlela, ukuphatha okuhle, kanye nokuphuculwa kwengqalasizinda okuqhubekayo konke kuyizimpawu ezibalulekile zalesi sizwe esake sahlonishwa futhi savalwa.
Amacwecwe eSumerian abhekisele ezweni elibizwa ngokuthi iMagan, igama okucatshangwa ukuthi libhekisela ezimayini zasendulo zethusi zika-Oman. Igama lezinsuku zamanje zezwe kukholakala ukuthi livela ezizweni ezingama-Arabhu ezisuka ezweni lazo zisuka esifundeni sase-Uman eY Yemen. Izizwe eziningi zahlala e-Oman ziziphilisa ngokudoba, ngokufuya noma ngokufuya amasheya kanti namhlanje imindeni yama-Omani iyakwazi ukulandelela izimpande zookhokho bayo kwezinye izingxenye ze-Arabia.
I-Oman inesimo sezulu esishisa kunazo zonke nesomiso emhlabeni. Kodwa-ke, kunomehluko omkhulu phakathi kwendawo esogwini, izindawo zezintaba, ugwadule oluyinkangala nolwandle nesifunda eseningizimu-ntshonalanga yeDhofar.
Amazinga okushisa osuku ehlobo ogwini angadlula kalula i-40 ° C (104 ° F). Ngokuhambisana namazinga okushisa ebusuku e-30 ° C (88 ° F) noma ngaphezulu nomswakama ophakeme, lokhu kwenza ukuphuma ngaphandle kungathandeki kakhulu. Ubusika bumnandi kakhulu ngamazinga okushisa esikhathi sasemini ngokuvamile phakathi kwe-25 ne-30 ° C, ngakho-ke isikhathi esithandwayo sokuhamba.
I-Northern Oman (Muscat, Bahla, Buraimi, Izintaba zaseHajar, uMadha, uMatrah, iMinsandam Peninsula, iSohar), inhloko-dolobha, ugu lwe-Al-Batinah oluvundile, izintaba ezinhle zaseHajar kanye nePhalamende laseMusandam
I-Central Ogwini Ogwini (i-Ibra, iMasirah Island, iSur, i-Wahiba Sands), izindunduma ezesabekayo, izinkundla ezindala kanye nendawo enhle yasogwini igcwala ulwandle i-Indian Ocean
IZufar (Dhofar) (Salalah) izindawo eziphansi ezisogwini nezintaba ezingasemngceleni weY Yemen
I-Empty Quarter ehlane elikhulu eliyinkangala kufaka phakathi indawo enomngcele ongachazwanga kakhulu neSaudi Arabia.
Muscat - inhlokodolobha mlando nedolobha elikhulu kunawo
I-Bahla - idolobha eli-oasis eliyikhaya lesiza samagugu emhlabeni i-UNESCO
Buraimi - umngcele onqamula idolobha eliseduze ne Al Ain e-United Arab Emirates
I-Ibra - isango eliya kumaWihiba Sands
UMatrah - ohlangana nenhloko-dolobha futhi ungumlando nje
UNizwa - uqukethe enye yezindawo ezaziwa kakhulu ngasesigcawini
ISalalah - eningizimu, ecishe icishe ibe nezindawo ezishisayo ngesikhathi seKareef (empumalanga eseningizimu-mpumalanga)
USohar - omunye wemizi edumile yaseSindbad
I-Sur - lapho ama-amadows asenziwa khona ngesandla
Izintaba zaseHajar - ibanga elihle ngokubabazekayo, eliphakeme kakhulu ePeninsula yase-Arabia, engena phakathi I-United Arab Emirates.
Madha - ukumbiwa okuncane kwe-Oman kuzungezwe ngokuphelele yi-United Arab Emirates
IMasirah Island - isipiliyoni sesiqhingi sogwadule silindelwe kulolu suku lwesiphephelo sefudu nezinye izilwane zasendle
I-Musandam Peninsula - ukumbiwa kwamatshe ku-Straits of Hormuz nge-wadis enhle ethile
I-Wahiba Sands - izindunduma ezinkulu ezigingqika kuze kufike lapho iso libona khona
Ama-visa ayadingeka kwamanye amazwe ngicela ungene kuwebhusayithi esemthethweni. Umuntu kumele afake isicelo se-visa online. Zisebenza izinsuku ze-30, ezinwebekayo kanye ngemali.
Imali ekhokhwayo yi-OMR20 futhi ipasipoti yakho kufanele isebenze kungaphansi kwezinyanga ze-6 kusukela ngosuku lokufika. Noma yiziphi izindleko ze-visa zingakhokhwa kusetshenziswa ama-dirhams e-UAE ngesilinganiso se-AED10 kuya ku-OMR1. Ezikhumulweni zezindiza, imali ekhokhwayo yama-visa ingakhokhwa kunoma yiluphi uhlobo lwemali lwe-Gulf States Co -oper Council (GCC), ama-euro, nangamadola aseMelika.
Kuvinjelwe ukuletha izibhamu, ama-narcotic noma izincwadi zocansi ku-Oman. Abangewona amaSulumane bavunyelwe ukuletha amalitha amabili wotshwala ezweni ku-Seeb International Airport kuphela. Awuvunyelwe ukuletha utshwala ezweni ngezimoto ezizimele ezindaweni zokuwela umngcele.
Cishe zonke izindiza zomhlaba wonke zifika eMuscat International Airport (MCT) eMuscat. Kukhona nenombolo encane yezindiza zamazwe omhlaba eziya eSalalah (SLL). Ukuthenga i-visa lapho ufika eSalalah kungaba nzima impela, njengoba isikhumulo sezindiza esincane kakhulu futhi izikhulu zabokufika zivame ukungabi noshintsho ngamanothi amakhulu.
Bonke abashayeli bamatekisi e-Oman bangabokudabuka e-Omani njengoba lo msebenzi ovikelwe. EMuscat kunezinsizakalo zocingo / zamatekisi. Ngenkathi kuphephile futhi kujwayelekile ukukhipha lapho ufuna kubo izindleko ziphezulu. Funa i- "Sawubona Taxi" ne "Muscat Taxi" phakathi kwabanye.
Amatekisi anebheji le-orange ajwayele ukusebenza okwenziwa ngumnikazi, lawo awahlangene nemali yokuxoxisana ngaphambi kokusuka. Uma uthola inani lentengo eliphansi kakhulu, khona-ke ungamangali uma iTekisi iyeka ukwengeza abagibeli abengeziwe ngaphandle kokuthi ucele ukuba ibe yimfihlo. Ungacela ukubandakanyeka, vele uthi 'taxi taxi' umshayeli, futhi uzokhokhela zonke izihlalo (4) bese usenetekisi ngokwakho. Abesifazane kumele bahlale bodwa ngemuva.
Kukhona namabhasi amancane (amabhasi e-Baisa), umgomo ukuthi wabelana ngebhasi noma imoto nabanye bese ukhokha inani eliphansi ngenxa yalokho. Le ndlela abesifazane abahlala e-Oman bahamba ngayo uma kufanele basebenzise izithuthi zomphakathi. Abesifazane kufanele bahlale eduze kwabanye besifazane uma kukhona ebhasini. Abesilisa kufanele bathuthele kwezinye izihlalo. Uma zingahambi ngokushesha, mane ume emnyango, uzibheke ngabheke phambili. Bazothatha ukusikisela nokuhamba. Yize lokhu kungazizwa kuyinqaba kubantu bakwamanye amazwe, kodwa kulindeleke indlela yokuziphatha ku-Omanis. Ukungahlali eduze kwendoda kuzogwema noma yiziphi izimo ezingezinhle zezimpawu ezixubile.
Kukholwe noma cha, kodwa empeleni akukho emthethweni ukushayela ngemoto engcolile e-Oman. Ungahle umiswe ngamaphoyisa angakukhokhela i-OMR10, yize kungenzeka ukuthi azokutshela ukuthi ugeze uhambo lwakho.
Ukushayela uzungeze i-Oman ngemoto yakho (eqashiwe) kulula impela. Umgwaqo onemizila emine uxhuma iMuscat neNizwa kanti umgwaqo omkhulu osanda kwakhiwa usuka eMuscat uya eSur.
Kusenezingxenye ezinkulu zendlela yeSur - Muscat engenasiginali yeselula. Uma wehluleka zilungiselele ukulinda ngaphandle. Noma shaya uhambo lokuya edolobheni elilandelayo futhi uthole umakhenikha ukubuyisa emotweni yakho.
Isi-Arabhu siwulimi lukazwelonke, kepha iningi lama-Omanis lizokhuluma kahle ngesiNgisi esihle kakhulu, ikakhulukazi ezindaweni ezinkulu zabavakashi kanye nasemadolobheni. Isihambi esikhuluma isiNgisi akufanele sibe nobunzima bolimi ngaphandle kokuthi sishaye ithrekhi eshaywayo.
U-Oman udume ngezinkundla zawo zomlando okuyizimpawu zamazwe ahlaba umxhwele kakhulu emhlabeni. Kukhona izinqaba nemibhoshongo engaphezu kwe-500 okwakuyizindlela zokuvikela zendabuko nezindawo zokubheka ukunqamula abahlaseli abangahle babe khona. Ezinye zezibonelo ezinhle kakhulu zitholakala kalula enhlokodolobha, i-Muscat. Izindiza zeJalali nezaseMirani zimile ekungeneni kweMuscat Bay kanti zivela ekuqaleni kwekhulu le-16th.
I-Bahla Fort ngaphansi kwezindawo eziphakeme zeJjebel Akhdar iyindawo ye-UNESCO World Heritage Site futhi inezindonga ezingama-7 amamayela. Yakhiwa ngekhulu le-13th ne-14th lapho i-Bahla yayiyidolobha elichumayo lama-oasis.
Izintaba ezimangelengele zika-Oman zinikeza izindawo ezinhle futhi mhlawumbe ngamathuba amahle kakhulu okushayela e-walis eyomile noma kuphi emhlabeni. Iningi le-wadis lenze imigwaqo (imvamisa engalingani kodwa ihlanzekile ngokwanele) kanti eminye idinga ukungahambi kahle emigwaqweni. Ungangena kalula endleleni eshaywayo ungene ezindaweni ezikude.
Izindunduma ezinkulu zasogwadule ziyafika lapho iso lingabona khona eWahiba Sands.
Amabhishi ase-Oman ayizindawo ezinkulu zokuzalela zezinhlobonhlobo zezinhlanzi zasolwandle. IMasirah Island yukubheja okungcono kakhulu lapho izinhlobo ezine zizalela khona, kufaka phakathi inani elikhulu kunawo wonke wesikhumba emhlabeni.
Izwe lingazigabise hhayi kuphela izindawo ezinkulu zogwadule, namakhulu ngamamayela osogwini olungagadli muntu, kodwa nezintaba ezingaphezulu kwezinyawo ze-9000.
Imali eseMuscat yi-Omani rial (OMR). Umhlanga owodwa wenziwa nge-1000 baisa futhi uboshwe ngokusemthethweni kumadola ase-2.58 e-US nge-1 u-Omani ngomusa owenza i-Omani ibe ngomunye wemali ebaluleke kakhulu emhlabeni. Amanani wokushintshana emigwaqweni angaphansi kwe-1-2%.
Kunama-ATM esikhumulweni sezindiza namanye amaningi eMuscat nakuwo wonke amadolobha amakhulu, kodwa hhayi wonke lawo athatha amakhadi aphesheya. Ungashintsha imali yangaphandle kwizibali ngaphakathi kwesikhumulo sezindiza nokushintshana ngemali kulo lonke i-Oman.
Yini ongayithenga e-Oman.
Isibonakaliso sesizwe sika-Omani yisibaya esibunjiwe njenge-khanjar. Lezi ziyahlukahluka kakhulu ngekhwalithi nezindleko, kodwa cishe zonke izitolo zizothwala amamodeli ambalwa ahlukahlukene. Iningi lazo zanamuhla zenziwa izingcweti zaseNdiya noma zasePakistan ngaphansi kokuqondisa kwe-Omani, kanti eziningi zenziwa eNdiya noma ePakistan. Kunezinhlobonhlobo ezinkulu ngekhwalithi, kusukela ekubambaneni kuya emgodini. Izibambo ezinhle kakhulu zenziwe ngokhuni oluhlotshiswe ngesiliva, kuyilapho izibambo ezisezingeni eliphansi zenziwa nge-resin. Bheka ngokucophelela sheath ukubona ikhwalithi yomsebenzi wesiliva. Ikhikhithi enhle esezingeni eliphezulu ingabiza ngaphezulu kwe-OMR700. Imvamisa, labo bazoza ebhokisini lesethulo, bafake nebhande.
Okunye okukhumbuza umlando wezwe lesikhathi esidlule ngenduku yokuhamba eyaziwa ngokuthi yi-arsaa. Lo ngumhlanga onenkemba ecashile kuwo, ongafakazela ukuthi uyindawo yokukhuluma ekhaya. Ngeshwa, emazweni amaningi, kuzofakazelwa indawo yokukhuluma nezikhulu zenkambiso hhayi yabangani nomndeni. EMusandam, i-khanjar ivame ukufakwa esikhundleni seJerz njengokugqoka okuhlelekile, induku ehamba nekhanda elincane lesibambo njengesibambo.
I-Omani isiliva nayo iyisikhumbuzo esidumile, esivame ukwenziwa ama-rosewater shaker kanye namabhokisi amancane "we-Nizwa" (aqanjwe ngedolobha avela kulo kuqala). “Abaphethe imiyalezo” yesiliva (ebizwa ngokuthi yi-hurz, noma i-herz), okuvame ukubizwa ngayo kumasouki ngokuthi “imishini yefeksi yakudala” nayo iyathengiswa. Imikhiqizo eminingi yesiliva izogxivizwa nge- “Oman” kuyo, okuyisiqinisekiso sobuqiniso. Izinto zesiliva ezintsha kuphela ezinganyakaziswa. Kunenani elikhulu lesiliva 'elidala' elikhona elingeke linciphiswe. Noma kungenzeka kube yiqiniso, ukukuphonsa phansi kungonakalisa inani layo lendawo. I-Caveat Emptor ngamagama wewashi. Namathela ezitolo ezihlonishwayo uma ucabanga ukuthenga i-Omani isiliva yanoma iluphi uhlobo.
Kukhona Ukukhetha okuhle kwe-Omani isiliva okutholakala njengobucwebecwebe. Izinto ezithengiswa ku-Muttrah souk kungenzeka zingabi yizinto ze-Omani zangempela. Esikhundleni salokho vakashela iShatti Al Qurm ngaphandle nje kweMuscat noma iNizwa Fort.
Izigqoko ezihlukile ezigqokwa amadoda ase-Omani, abizwa ngokuthi “ama”, nazo zithengiswa kakhulu, ikakhulukazi eMuttrah Souk eMuscat. Izindleko zangempela zivela ku-80 OMR.
IFrankincense ithengwa okuthandwa kakhulu esifundeni saseDhofar njengoba isifunda besilokhu siyindawo yokukhiqiza le nto. I-Myrrh nayo ingathengwa ngemali eshibhile e-Oman.
Njengoba umuntu angalindela, u-Oman futhi uthengisa amakha amaningi enziwe ngenani elikhulu lezithako zendabuko. Ngempela, amakha abiza kakhulu emhlabeni (i-Amouage) enziwa e-Oman kusuka inhlaka nezinye izithako, nezindleko ezungeze i-OMR50. Ungathola futhi amakha e-sandalwood, imure ne-jasmine.
Amahora wokuvula phakathi nenyanga engcwele yeRamadan akhawulelwe kakhulu. Izitolo ezinkulu aziqinile, kepha unganciki ekwazini ukuthenga noma yini ngemuva kwe-iftar. Ntambama, izitolo eziningi zivaliwe noma kunjalo kodwa lokhu akucacisiwe kuRamadan.
Sebenzisa amakhadi wesikweletu ezitolo kushaywa noma kuphuthelwe. Kungcono ukuthola imali kwa-ATM. Amanothi amancane ehlelo akunzima ukuza kodwa adingekile ekuxoxeni. Ngaphandle kokuthi use-supermarket, irestirenti noma ukuxoxisana ngezitolo kuyanconywa, futhi lokhu kufanele kuqhutshwe ngenhlonipho.
Ukudla ikakhulu kungama-Arabhu, ama-East African, iLebanon, iTurkey neNdiya. Ama-Omanis amaningi enza umehluko phakathi kokudla “kwama-Arabhu” nokudla “kuka-Omani”, kanye nokuchazwa kwezitsha ezijwayelekile ezitholakala kuyo yonke iNhlonhlo yase-Arabia.
Ukudla kwe-Omani kuvame ukungabi zinongo kangako futhi kuphekwe ngezingxenye ezinkulu kakhulu - zonke izinhlanzi azijwayelekile ekudleni kwasemini kwezinye izindawo zokudlela zasendaweni (ukunamathela ekudleni kwasendaweni, kulula kakhulu ukudla ukudla okuningi okungaphansi kwe-OMR2). Njengoba kufanele izwe elinogu olude, ukudla kwasolwandle kuyindishi ejwayelekile, ikakhulukazi ushaka, omnandi ngokumangalisayo. Ukudla kwendabuko okuyiqiniso kwe-Omani kunzima ukukuthola ezindaweni zokudlela.
Amaswidi ka-Omani ayaziwa esifundeni sonke, ngokuthandwa kakhulu ngokuthi “halwa”. Le yinto evuthayo, eqinile engaziphathi kahle njengoju futhi idliwa ngesipuni. Ukunambitheka kuyafana neTurkey Delight. Izinsuku ze-Omani ziphakathi kwezingcono kakhulu emhlabeni futhi zitholakala kuzo zonke izindawo zenhlalo nasemahhovisi.
Amaketanga okudla okusheshayo aseMelika, ikakhulukazi i-KFC, iMcDonalds, neBurger King, akunzima ukuthola emadolobheni amakhulu, ikakhulukazi iMuscat neSalalah.
EKhaboora ungathola iPakistan Porotta. Bangobukhulu obuphindwe kabili kwe-Indian Porottas futhi babukeka njengamapappadams. Kepha zinambitha njengama-porottas futhi zizacile futhi zimnandi kakhulu. Ama-porottas amathathu ayatholakala nge-Rs11. Isiko u-Omani Khubz (isinkwa) okunzima ukusithola ngaphandle kwekhaya lakwa-Omani, kodwa ngolwazi umuntu kufanele azame kanzima ukuthi angaphuthelwa. Lesi sonto sesiko senziwe ngofulawa, usawoti namanzi okuphekwe phezu komlilo (noma isitofu segesi) epuletini enkulu yensimbi. Isinkwa sinciphile emaphepheni futhi si-crispy. Kudliwa cishe nanoma yikuphi ukudla kwe-Omani, kufaka ubisi olushisayo noma i-chai (itiye) lesidlo sasekuseni- “Omani cornflakes”.
ESohar ungathola isidlo sasemini esihle nge-Ayla curry, u-Ayla Fry ne-Payarupperi. Lindela ukukhokha ama-baisa we-400 kuphela (i-OMR0.40) okubhekwa njengentengo ephansi kakhulu yasemini lapha.
Ukubheja okuhle kwabahambi besabelomali 'izitolo eziningi zekhofi' ezivame ukwenziwa ngabantu abavela ezwenikazi laseNdiya futhi zithengise ukudla kwasePakistan / Indian nase-Arabhu, izitsha zibiza kakhulu umhlanga owodwa noma ngaphansi, ikakhulukazi 'ama-sandwich' ingaba ezungeze i-200 noma i-300 baisa. Ngokuvamile bathengisa i-falafel, okuyindlela enhle futhi engabizi yemifino. Ikhofi labo langempela lihlala lingamfuni uNescafe kodwa itiye labo libonisa ukuphathwa kwabo komhlaba ongaphansi kokuba yi-masala chai.
Ukudla nokungenisa izihambi i-Oman ngumbukiso waminyaka yonke ogxile emkhakheni wokudla nowokungenisa izihambi wase-Oman. Ibonisa ukudla nesiphuzo, imishini yehhotela nokuhlinzekwa, ikhishi nezinto zokupheka, imikhiqizo yokufaka ukudla, nobuchwepheshe bokulungisa ukudla, neminye imikhiqizo nezinsizakalo ezihlobene.
Iminyaka yokuphuza esemthethweni neyokuthenga utshwala yi-21.
Amanzi okuphuza ngebhodlela (amaminerali) atholakala kalula ezitolo eziningi. Amanzi ompompi aphephile ngokujwayelekile; kodwa-ke, iningi lama-Omanis liphuza amanzi asebhodleleni futhi ukuze liphephe, kufanele futhi.
Utshwala buyatholakala ezindaweni zokudlela ezikhethiwe namahhotela amakhulu futhi kuvame ukubiza kakhulu (kusuka ku-OMR1.5 nge500mL Carlsberg kuya kuma-4 rials). Ukuphuza utshwala esidlangalaleni akuvunyelwe, kepha ungazitholela iziphuzo zakho futhi ujabulele ezindaweni zomphakathi kepha ngasese njengokukanisa ngamabhishi, isihlabathi, izintaba, noma empeleni nakwezinye izindawo ezikude. Abahlali bangaphandle kuphela abangathenga utshwala ezitolo zotshwala nangomkhawulo othile. Abahlali badinga amalayisense otshwala okuthi basebenzise utshwala ezindaweni zabo zokuhlala. Kepha imakethe emnyama yotshwala isakazeka kabanzi emadolobheni futhi utshwala bungatholakala kalula.
Abahambi bakwamanye amazwe bavunyelwe amalitha omoya we-2 njengemvume yemithwalo yempahla yamahhala. Abahambi bangathatha imimoya esitolo samahhala emsebenzini egumbini lokuphumula lokufika.
Ngesikhathi seRamadan, ukuphuza noma yini esidlangalaleni kuyenqatshelwa phakathi nesikhathi sasemini (ie, ukuphuma kwelanga kuya ekushoneni kwelanga), ngisho nakwabezinye izizwe. Nakekela ukuphuza ekusithekeni kwekamelo lakho.
Lapho ulala khona
I-Oman inenqwaba yezindawo zokuhlala - ukusuka emahhotela aphambili nokunethezeka ukuya ezindlini ezibucayi ogwadule ezakhiwe kusukela ngamahlamvu esundu asezinsuku.
Eminyakeni yamuva nje, u-Oman ubelokhu ezama ukuguqula okuthile kokuya ngezinkanyezi ezinhlanu kubahambi abahamba kahle. Lokhu akubeki inkinga kwababheka isabelomali eMuscat, futhi nangaphandle kwenhlokodolobha kusenobubanzi bezindlela zokukhetha isabelozimali. Kwezinye izingxenye zezwe, noma kunjalo, indawo yokuhlala ingakhawulelwa kumahhotela nasezindaweni zokuphumula eziphezulu.
Amatende avumelekile endaweni yonke, futhi ngokuvamile kulula ukuthola indawo yokumisa itende kanye ngaphandle kwamadolobha amakhulu. Amathrekhi amancane wokungcola ahlala ehla njalo emigwaqweni emikhulu, futhi ukulandela lawo imizuzu embalwa kuvame ukuholela endaweni enhle. Ukukhempa ku-wadis kungenzeka futhi, kepha kungaba yingozi uma kunetha imvula (lapho i-wadi iphenduka umfula).
I-Oman iyizwe eliphephile futhi ubugebengu obukhulu abuvamile. Amaphoyisa aseRoyal Oman asebenza kahle futhi athembekile.
Ukushayela eMuscat kwesinye isikhathi kungaba yinkinga, kepha lokhu kungenxa yokuxinana kunokushayela kabi endaweni yabantu bendawo. Ngaphandle kwamadolobha amakhulu, ingozi yokushayela ejwayelekile ilele esondweni ngenxa yobude obude benkangala engenalutho. Ukushayela e-Oman kudinga ukunaka okungalindelekile. Inesilinganiso sokufa kwesibili esiphakeme kakhulu kusuka ezingozini zomgwaqo emhlabeni (esidlule kuphela yiSaudi, silandelwa eduze yi-UAE). Abashayeli be-Omani abangaphandle kwamadolobha bavame ukushayela ngokukhulu ukushesha futhi badlula ngokungaziphathi. Ukushayela ebusuku kuyingozi ikakhulukazi njengoba abashayeli abaningi behluleka ukukhanyisa izibani. Amakamela azongena emgaqweni yize abona izimoto zisondela, futhi ukushayisana kuvame ukubulala amakamela nomshayeli.
Njengakwamanye amazwe amaSulumane, ubufebe abukho emthethweni.
I-Oman ayinzima njengeSaudi Arabia engomakhelwane nomphakathi we-LGBT, kepha uhulumeni wase-Omani akavumeli noma yiluphi uhlobo lomsebenzi we-LGBT. Izinhlawulo zifaka inhlawulo, kuze kube yiminyaka eyi-3 ejele.
U-Oman ufudumele unyaka wonke futhi amahlobo angashisa kakhulu. Njalo phuza amanzi okuphuza nawe futhi uqaphele ukuphuma komzimba emazingeni okushisa aphezulu. Uma ungasetshenziswanga ekushiseni kungakucwilisa futhi kubangele nezinkinga ezinkulu zempilo.
Abantu abaningana bazamile ukuwela i-Omani ugwadule bebodwa e-4WD eqashiwe. Abanye balaba bantu bafa noma basindiswa ngesikhathi esifanele.
Ukuhamba ugwadule kudinga ukulungiswa okufanele. Kubukeka kulula kusuka ku-4WD yesimanje enomoya, kodwa uma lokho kwehluleka ungazelele ubuyela kwizisekelo.
Ungalokothi uhambe ngomgwaqo wedwa. Ubuncane bezimoto ezimbili kuya kwezintathu (zokwenza okufanayo) umthetho. Shiya uhambo lwakho nomngani ngemiyalo ecacile uma ungabuyi ngesikhathi. Thatha okungenani: - Amathuluzi wokutakula: izikhala, izintambo (nezinamathiseli), amaseshi esihlabathi noma isitebhisi - amathayi amabili okusiza nayo yonke imishini edingekayo - ipompo yomoya (umthamo omkhulu) - amanzi anele (okungenani amalitha we-25 ngaphezu kokuba ucabanga ukuthi ucabanga uzodinga ukuphuza) - uphethiloli owanele: azikho iziteshi zikaphethiloli phakathi kwendawo.
Uma une - noma ungathola - ifoni ye-satellite, yithathe. (Ama-Mobiles asebenza kuphela ezindaweni ezinomkhawulo.) Hlola imoto yakho ngaphambi kokuqala uhambo olunjalo.
Ama-Omanis ngokuvamile athobekile kakhulu futhi angabantu abaphansi. Imithetho ejwayelekile yenhlonipho lapho uhamba ezweni lamaSulumane kufanele ilandelwe e-Oman, noma ngabe abantu bendawo bebukeka bengelutho kangako kunabomakhelwane babo.
Hlala uthule ngale sultan, owenze okuningi ukuthuthukisa isizwe emlandweni wakamuva. Kulindeleke ukuthi aphathwe ngenhlonipho eyeqile.
Ukubambelela kuvame kakhulu e-Oman. Izingane, abesilisa nabesifazane kungenzeka bakubuke nje ngokuba ungumfokazi, ikakhulukazi uma uhamba ngaphandle kwesizini nasezindaweni ezingaphandle kwendlela. Lokhu akuchazwa njengokuthuka kepha kukhombisa intshisekelo, futhi ukumamatheka okunobungane kuzoshiya izingane zigembula futhi zibonisa futhi abadala bezama ngenkulu imishwana yabo yesiNgisi.
Ngaphandle kweMuscat neSalalah, ungamamatheka ubulili obuhlukile, ngoba cishe noma ikuphi ukuhlangana nabobulili obuhlukile kungabukwa njengokufenda. Umphakathi ohlukaniswe kakhulu wenza noma yiliphi ithuba abantu bakhulume nabobulili obuhlukile ukuze babhekwe njengabanobuncane bobabili ubulili.
Kumele kuqondwe ukuthi ngaphansi komthetho ka-Omani, u-Omani angathatha noma ayiswe enkantolo ngenxa yokuhlambalaza omunye umuntu, njengokubiza ngegama lokuthuka ("imbongolo", "inja", "ingulube", "nezimvu" njll.). U-Omanis, noma "ethobekile" ebhekisisa kakhulu kunoma yini ayibonayo njengokugxeka, kungaba eyomuntu uqobo, eyezwe, noma yini abayibona njengeqondiswe eGulf. Yize iSaudi Arabia ijwayele ukuqondiswa kahle kumahlaya emhlabeni wama-Arabhu (ikakhulukazi kuma-Levant), u-Omanis akakutholi kahle lokho. Lokho abantu baseNtshonalanga okuvame ukukubheka njengamazinga “okuhlekisayo” okujwayelekile, kuyinto evamile e-Oman futhi kungenxa yokuthi u-Omanis ukhulele endaweni lapho ukugxekwa nokubizwa ngamagama kungavunyelwe khona.
Izindawo ze-Archaeological of Bat, Al-Khutm ne-Al-Ayn
I-Aflaj Izinhlelo Zokunisela ze-Oman
Idolobha Lasendulo laseQalhat